Shaqaalaha shirkadda diyaaradaha Algeria Airways oo maalintii 5-aad shaqo joojin kujira – SBC
Shaqaalaha shirkadda diyaaradaha Algeria Airways oo maalintii 5-aad shaqo joojin kujira
Alger’s:- Shaqaalaha shirkadda diyaaradaha Algeria Airways ayaa wada maalintii shanaad shaqo joojin kadib markii uu guul dareestay heshiis u dhexeeyey guddi ka socda shaqaalaha shirkadda iyo maamulka shirkadda oo ku aadanaa kordhinta mushaaraadka shaqaalaha.
Shaqo joojinta ayaa sababtay in ay baaqdaan tobnaan duulimaad iyo musaafiriinta oo ku go’ddoomay airport-da Algeria iyo France gaar ahaan safarada ay muwaadiniinta Algeria ay ugu soo xagaa bixi lahaayeen dalkooda.
Ra’iisal wasaaraha Algeria Axmed Aw Yaxya ayaa amar ku bixiyey in la fududeeyo safarada si loo soo qaado musaafiriinta ku xaniban airport-da Yurub.
Sidoo kale wasiirka gaadiidka France ninka lagu magacaabo Terry Mariana ayaa la kulmay dublumaasiyiinta safaaradda Algeria ee magaalada Paris , wuxuuna ku nuuxnuuxsaday mas’uuliyadda ka saaran shirkadda diyaaradaha Algeria Airways macaamiisheeda.
Shaqaalaha shirkadda Algeria Airways ayaa codsanaya in loo kordhiyo mushaarkooda %106 halka maamulka shirkadda ay u ogol yihiin %20.